Jaamacadda Abaarso Tech oo Xaflad Qalinjabin ah u Samaysay 20 Arday oo Dhammaystay Waxbarashadda Heerka Labaad | Haldoornews
Jaamacadda Abaarso Tech oo Xaflad Qalinjabin ah u Samaysay 20 Arday oo Dhammaystay Waxbarashadda Heerka Labaad
Hargeysa(Haldoornews)-Jaamacadda Abaarso Tech ayaa xaflad si weyn loo soo agaasimay u qabatay 20 arday oo dhammaystay waxbarashadda heerka labaad ee Master-ta, taas oo lagu qabtay Hotel Crown, taas oo ay ka soo qaybgaleen madaxweyne ku xigeenka, wasiiro, wasiiro-ku-xigeeno, agaasimayaal, macalimiinta iyo maamulka Jaamacadda Abaarso Tech.
Ugu horrayn waxa halkaasi ka hadlay Maxamuud Cismaan Maxamed oo ka mid ah maamulka Jaamacadda Abaarso Tech, oo ka warbixiyay maraxilkii waxbarasho ee ay soo mareen ardaydda qalinjabinaysa, kuwaas oo dhammaystay shahaadooyinka MBA-da (Master of Business Administration) iyp MPH (Master of Public Health). Kuwaas oo uu sheegay in muddadii ay waddeen ay cilmi-baadhisyo kala duwan soo gudbiyeen, kuwaas oo dalka iyo dadkaba wax weyn u qaban doona. Waxa kale oo uu sheegay Maxamuud in Jaamacadda Abaarso Tech tahay jaamacaddii ugu horraysay ee dalka ka hirgalisay waxbarashadda heerka labaad ee master-ta, taas oo la bilaabay sannadkii 2009 kii. Waxaanu intaa ku daray, in ardayddani ay yihiin kuwo waxbarasho ahaan dhisan, rajaynayaana in kaalin weyn ka qaadan doonaan horumarka dalka. 20 arday ayaa 15 ka mid ahi ay dhammaysteen MBA halka 5 mid ahina ay qaateen MPH.
Guddoomiyaha Jaamacadda Abaarso Tech, Dr. Axmed Xuseen Ciise, ayaa ugu horrayn u hambleyeeyay ardaydda qalinjabinaysa, kuwas oo ku tilmaamay kuwo la yimid dedaal, karti iyo dhabar-adayg ay yoolkooda kaga dhabeeyeen. Guddoomiyahu wuxuu kala oo uu ku dheeraaday sida loogu baahan yahay barnaamujyadda ay jaamacaddu bixiso ee ay u taababayaan baahidda qaranka, isagoo sheegay ka jaamacad ahaan inay markasta ku dedaalaan sidii bulshadda loogu soo gudbin aqoon taabanaysa wax-qabashadda baahiyahooda, labaddan barnaamujna uu midna dhinaca fayo-dhawrka dhaqaalaha uu awoodda saarayo, midna fayo-dhawrka caafimaadka bulshadda uu muhiimadda siinayo. “Barnaamujkan MBA-du waa mid aynu baahi weyn u qabno, horumarna balaadhana gaadhsiin kara ganacsigeena maaddaama oo uu awoodda saarayo dhinaca maaraynta.”
Waxa kale oo guddoomiyahu xusay in ardaydda dhammaystay shahaadadda heerka labaad ee MPH ay intii ay waxbarashadda ay wadeen ay sameeyeen cilmi-baadhisyo aad u badan, oo dhammaantood laga sameeyay meel aad loogu baahnaa horena looga samayn, kuwaas, oo maaddaama aanay hore u jirin daraasado ka horeeyay, ay caqabado badan iyo culays badani kaga horyimaadeen, haddana maanta ah kuwo uu qaranku ka dheefayo wax badana ka tari-doona horumarka nimaadkeena caafimaadka. Ugu danbayntii, waxa uu guddoomiyahu ku soo gunaadaday hadalo iskugu jira duco iyo dardaaran uu u soo jeediyay ardaydda qalinjabinaysa.
Axmed Maxamed Faarax, oo ka mid ahaa ardaydda dhammaystay MPH oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa ugu horrayn u mahadnaqay macalimiintii, iyo maamulkii Jaamacadda Abaarso Tech ee muddada sannad iyo badhka ah wax soo barayay. Isagoo sheegay inay ahayd mid ay ka dheefeen. Waxa kale oo Maxamuud sheegay inay halgan dheer ahayd, oo iyaga oo shaqaynaya, reero leh oo masuuliyaddi saaran tahay, haddana ay u badheedheen inay kaga dhabeeyaan yoolkooda ahaa inay waxbarashadda korodhsadan.Taas oo ugu horrayn ay mahadeeda Allah (SWT) leeyahay. Waxa kale oo Maxamuud ka warbixiyay caqabadahii aadka u badnaa ee soo waajahay intii ay waxbarashadda soo wadeen ay la kulmeen, isagoo xusey maadaama oo ay aqoontoodu u badnayn samaynta daraasado farabadan, ta had iyo jeer ka hor iman jirtay ay tahay xog-la’aan, taas oo ardaydda ku kalifaysa in waxyaalaha ugu yar iyagu ay baadhitaan ku sameeyaan.
Garaad C/raxmaan Axmed, oo ka mid ahaa ardaydda dhammaysatay shahaadadda sare ee MBA-da, ayaa ku dheeraaday inay qiimaha ay leedahay qofku inuu dalkiisa ka dhex helo waxbarasho tayo leh, isagoo dalkiisa ka dhoofin una tegin meel dheer. Waxaanu sheegay in aqoonta ay barteen ay noqon doonto mid ay wax kaga qabtaan caqabadaha dhan kasta leh ee qarankeena haysta. Isla markaana aanay dhinacooda waxba ka hagran-doonin sidii umaddooda ay cilmiga ay barteen uga faa’idayn lahaayeen. Waxaanu ugu danbayn mahadnaq u jeediyay cid kasta oo qayb ka ahayd inay si guul ah ugu afjaranto waxbarashadda ay muddada dheer soo wadeen.
Foosiya Maxamed, oo ah Guddoomiyaha Ururka Kalkaaliyayaasha Caafimaadka iyo Umumulosooyinka Qaranka, ayaa ugu horrayn u mahadnaqday Guddoomiyaha Jaamacadda Abaarso Tech, Dr. Axmed Xuseen Ciise, oo ay sheegtay inuu aqoontiisii uga faa’ideeyay da’yarta Somaliland. Mawro Foosiya, waxa kale aad uga warrantay sida looga baahan yahay barashadda caafimaadka bulshadda (Public Health), oo intii ay ku jirtay mihnadda caafimaadka ay ogaatay muhiimadda ay leedahay barashadoodu. Waxaanay sheegtay inay ku hanweyn tahay inay ardadayddani ay arrintan wax badan ka qaban doonaan.
Waxa isna halkaasi hadal ka jeediyay Madaxa Xidhiidhka Bulshadda shirkadda Telesom, Mr. Maxamed Axmed Cabdi (Darbo), oo ugu horrayn bogaadiyay ardaydda qalinjabisay, waxaanu sidoo kale sheegay in Jaamacadda Abaarso Tech qaybteeda masterta ay shaqaale badan oo Telesom ahi ay ka baxeen, taas oo isagu ka mid ahaa, isla markaana ay la og yahay tayadda aqooneed ee taala. Waxa isna halkaasi ka hadlay Madaxa shirkadda Oomaar International Mr. Maxamed Cali oo ardaydda ku hambeelayay dadadaalka ay la yimaadeen ay ku hanteen shahaadada sare, waxaanu kula kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan oo aanay intaa kaga hadhin.
Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Wasiirka Shaqadda iyo Arrimaha Bulshadda, Mud. Cali Maxamuud Axmed (Cali-Sandulle), Wasiir ku xigeenka Dhalinyaradda, ciyaaraha, iyo dalxiiska, Mud. Cabdirashid Ismaaciil Kaahin , Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashadda Mud. Abiib Maxamed Cali, oo dhammaantood iska dabamaray bogaadinta iyo hamblaydda iyo ardaydda qalijabisay.
Ugu danbayntii waxa halkaasi shahaadooyinkii ku guddoonsiiyay Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Mud. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici.
Jaamacadda Abaarso Tech ayaa ah jaamacaddii ugu horraysay ee bixisa waxbarashadda heerka labaad ee masterka, iyadoo ay ducfadani ahayd tii afraad ee qaadata shahaadada sare.